एजेन्सी, २९ वैशाख । कोरोना भाइरसको कारण अहिले हरेक कुरामा सावधानी अपनाउन जरुरी छ । नोटबाट भाइरस फैलिने त्रासका कारण मोबाइल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । तर तपाईको हातमा हरघडी हुने मोबाइलबाट पनि कोरोना सर्ने जोखिम उत्तिकै छ ।
यसकारण तपाईको मोबाइललाई सधैं सफा राख्नुहोस् । तर मोबाइल संवेदनशील कुरा हो । आज हामी तपाईलाई मोबाइल सफा गर्ने विधिबारे सिकाउँदै छौं ।
१. रुवाको उपयोग गर्नुहोस्
सबैभन्दा पहिलो आफ्नो मोबाइल फोनलाई अफ गर्नुहोस् । त्यसपछि रुवालाई रबिङ अल्कोहोलमा डुबाउनुहोस् । त्यसपछि रुवाले फोनको स्क्रिन पुस्नुहोस् । तर ध्यान राख्नुहोस्, रबिङ अल्कोहोल रुवामा थोरै मात्र राखेको हुनुपर्छ ।
२. मेडिकल वाइप्सको प्रयोग
मोबाइल सफा गर्नका लागि तपाईले बजारमा उपलब्ध ७० प्रतिशत अल्कोहोल भएको मेडिकल वाइप्स पनि प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ । यो वाइप्सले तपाईको फोनको स्क्रिन कुना काप्चा पुस्नुहोस् । यसले फोनमा भएको ब्याक्टेरियालाई पनि मार्ने काम गर्छ ।
३. एन्टी ब्याक्टेरियल पेपर
लकडाउनको समयमा केही स्टोरहरु खुलेका छन् जसमा केमिस्ट स्टोरहरु पनि हुनसक्छन् । यस्ता पसलमा गएर एन्टी ब्याक्टेरियल टिस्यु पेपर खरिद गर्नुहोस् र त्यसले फोन सफा गर्नुहोस् ।
टूथपेस्टको फाइदा त तपाईलाई थाहा नै छ तर आज तपाई आश्चर्यमा पर्नसक्नुहुन्छ । हजुर टूथपेस्टले तपाई फोनको क्यामेराको लेन्स पनि सफा गर्नसक्नुहुन्छ ।
थोरै टूथपेस्ट क्यामेराको लेन्समा लगाएर सफा कपडाले त्यसलाई पुस्नुहोस् ।